Pakistan: MSF oo Ka Naxdey Dadka Gudaha Ku Barokacay ee Xoogga Looga Soo Saarey Gobolka North West Frontier Province - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Islamabad 26 Jannaayo, 2010 – Ururka Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada ee Caafimaadka Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa aad uga naxay ku dhowaad 7,000 qof oo dad barokacay oo xoog looga soo saarey Muna oo kaa tirsan degmada Lower Dir ee Gobolka North West Frontier Province ee dalka Pakistan. 25kii Jannaayo, ayaa kooxaha MSF ee xaruntoodu tahay Munda ay ogaadeen in ciidamo mileteri ah oo hubeysan ay xoog ay qoysaska uga soo saarayeen xerada Munda ee dadka barokacay iyo dhisme ku yaalla suuqa oo ay MSF ka shaqeyneysa labadii bilood ee la soo dhaafey.
Ilaa horraantii Nofembar 2009kii, ayaa 450 qoys ay ku noolaayeen xeradan oo ay MSF dhistey. 4,500 qof oo kale oo deganaa dhisme suuqa ku yaalla ayaa sidoo kale in ay haystaa saaco kooban oo ay ku baxaan. Dhacdooyinkaa shaley dhacay ka hor, MSF waxa ay horeba si firfircoon ugu raadineysey dhul ku filan in uu hoy u noqdo qooysaskan waxaana horeba u muujisey welwelka ay ka qabto xaaladahooda nololeed oo aadka u xun.
Amarkan dadka lagu amrey in ay guuraan ayaa ahaa mid aan digniin ka soo horreyn. Dadka ayaa duhurkii loo sheegey in ay xerada ka baxaan marka la gaaro 10ka saac / 4ta galabnimo isla maalintaa. “Wax war ah kama haynin in uu amarkan soo socdey, mana jirin hay’ad kale oo joogta gobolka ama dadka barokacay oo hore u heley,” ayaa uu yiri Olivier Chenebon, oo ah wakiilka MSF ee dalka Pakistan. “Waxa ay haysteen afar saacadood in ay alaabtooda ku gurtaan ayna kaga baxaan xerada waxaana nalaga hor istaagey in aan diyaarinno in aan dadka barokacay aan halkaa ka wareejinno.”
rag, haween iyo carruur ayaa loo sheegey in ay u dhaqaaqaan dhinaca Walay Kandow, oo 40 daqiiqo gaarigu u socdo marka laga soo tago Munda. Hay’adda Qaramada Midoobey ee Qaxootiga (UNHCR) ayaa hawsheeda wadda xero barokacayaashu leeyihiin oo ku taalla Walay Kandow laakiin ma lahan tas-hiilaad soo dhaweyn iyo hoy ku filan lagu siiyo qoysaska cusub ee dhowaan yimid. “Dadka ayaa yimid waqti dambe waxaana ay ku khasbanaayeen in ay degaan habeen mugdi ah” ayaa uu yiri Gaetan Drossart, oo ah isuduwaha mashruuca MSF ee Lower Dir. “Qaarkood xaley bannaanka ayaa ay seexdeen caawana sidaas oo kale ayaa ay ku khasban yihiin.”
Subaxdii ay bisha Jannaayo ahayd 26ka, ayaa koox MSF ka socota ay timid Walay Kandow waxaana ay indhahooda ku arkeen tirada badan dadka ku sugaya waddada. “Ma garaneyn wax ay sameeyaan,” ayaa uu yiri Drossart. “Waxa ay dad weydiinayaan biyo iyo cunto, wax ay haystaan ayaa iska yar. Badi dadkan waxa ay ka soo carareen rabshadda ka socota Bajaur Agency oo deris la ah degmada waxaana mar kale soo wajahay xaalad kale oo dhib badan.”
Munda, ayaa MSF ay dadkaan ku gargaartey biyo la cabbo, musqulo, qubey, gargaar caafimaad, iyo sidoo kale teendhooyin ay siisey kuwa ku nool xerada. Qoyskii deganaan xerada waxaa ay soo qaateen teendhooyinkooda, halka barokacayaashii deganaa dhismaha suuqa ay hoy la’aan ku noqdeen Walay Kandow.
“Arrinta mudnaan siineyno waa in biyo siinno dadkan,” ayaa uu yiri Drossart. “Biyo ayaan halkaan keeni doonnaa wixi loo gaaro berri subax waxaana aan dhisi doonaa si aan daryeel caafimaad ugu bixinno sida ugu dhaqsaha badan.”
MSF waxaa ay aad uga welwelsan tahay xaaladda adage e jirta. Bedka dhulka loo qoondeeyey in uu hoy u noqdo qoysaska barokacay ayaa ka yar kii ay ku haysteen Munda. “Kii Munda ay ku haysteen ayaaba hore uga yaraa 450 qoys’” ayaa uu yiri Drossart. “Hadda waxa jooga in ka badan 1,000 qoys oo degdeg ugu baahan hoy habboon, iyo in ay helaan cunto iyo biyo.”
MSF waxa ay ku tirtirsiineysaa maamulka in ay u helaan dhul ay degaan dadkan nugul.
Ilaa 1998dii, MSF waxa ay gargaar caafimaad siineysay muwaadiniinta Pakistanida ah iyo qaxootiga Afqanistaaniyiinta ah ee dhibaatadu ka soo gaartey iskahorimaadyada hubeysan, daryeelka caafimaadka ee sida liidata loo soo gaari karo, iyo masiibooyin dabiici ah oo ka dhacay gobollada NWFP, FATA, Balojistan iyo Kashmir.
MSF wax maaliyad ah oo ay ku maalgeliso hawlaheeda Pakistan kama qaadato dowlad, iyada oo ku tiirsan oo keliya deeqo gaar ah oo ay dadku bixiyaan.
Tags: barokac, Gobolka North West Frontier, Muna, Pakistan, Walay Kandow